Nzira Dziviriro Yekukuvadza Paunenge Uchishandisa Wiricheya | Karman® Mawiricheya
Kuti uzo kudzivirira an kuipa apo kushandisa a wiricheya, unofanirwa kukwanisa kuziva chinokonzera iyo kuipa chekutanga. Kukuvara kwakanyanya kunowanzoitika kubva wiricheya kushandiswa kunosanganisira fudzi, ruoko, gokora, ruoko, uye ruoko. Kukuvara kunogona kusanganisira zvinyoro nyoro, kukuvara kwetsinga, kupwanya, kupwanya, uye kupokana. Pazasi pane pfupiso pfupi yekumwe kwekukuvara kwakanyanya uye maitiro ekuzviita kudzivirira kwavari.
hwiricheya kudonha kunogona kukonzerwa nezvinhu zvakaita semabhureki asina kukiyiwa, zvigaro zvekusimudza, uye kuwedzerwa kusingabatsiri. Falls inokanganisa zvese simba uye Vashandisi vemawiricheya. Nzira dzakanakisa dzeku kudzivirira kuwira ndeyekuti usapfuure uye uve nechokwadi chekusarudza wiricheya iyo inokodzera iwe yakanakisa maererano nehukuru uye kugona.
Kuti uwane rumwe ruzivo Tarisa kunze "Kudzivirira Kukuvara paWiricheya"
Bendekete ndechimwe chezvibatanidzwa zvakanyanya kufamba mumuviri. Nekuda kweizvi, zvinonyanya kubata kuipa kana zvanyanyisa kushanda. Bendekete rako ndiro mubatanidzwa mukuru unoshandiswa pakufambisa a wiricheya yemawoko. Paunokuvadza bendekete rako rako kufamba achange akaremara zvakanyanya. Kunyanyisa kushandisa kunogona kukonzera mhasuru kushushikana, rotator cuff misodzi, uye impingement.
Inokurudzirwa ku kusimbisa tsandanyama dzese dzekunze nekunze. Kudzidzira tsandanyama idzi zviri nyore kuita.
40-66% ye Vashandisi vemawiricheya ruzivo carpal tunnel.
Izvi zvinokonzerwa nekuzvimba mumatoni ako ayo anodzvinyirira iyo yepakati nerve iyo inogona kukonzeresa, kufenda, uye paresthesia. Carpal Tunnel inogona kukonzera kurwadziwa kunokanganisa zvakanyanya kubata kwako.
Kupfeka magurovhosi akapetwa kunogona kudzikisa kumanikidza kunoiswa pamaoko ako. Zvakare, kusimbisa mhasuru dzako uye kuchengetedza yako wiricheya midziyo inogona kubatsira kudzivirira kana kurerutsa carpal tunnel.
Iwe unogona zvakare kuyedza icing mawoko ako kwemaminitsi makumi maviri pakupera kwezuva.
Blisters uye Abrasions:
Inobata nezve 18% ye wiricheya vashandisi, mablister uye abrasions zvinogona kutungamira mukusagadzikana kwakakomba. Blisters inogona kukonzerwa neganda rako kukwiza pamusoro pechiso uye kunogona kuve nekupisa kwekunzwa. Abrasions, kune rimwe divi, inokonzereswa neganda richikwenya iro rakaomarara pamusoro.
Blisters anogona kudzivirirwa nekusarudza chigaro chine zvinhu zvisingakonzere kupenga. Zvakare, kuisa talcum poda kana petroleum jelly kunogona kudzivirira ganda rako kubva mukukwesana kukuru. Ive neshuwa yekupfekawo yakakodzera yakakodzera zvipfeko. Gloves uye kushandisa mavhiri ekuvhara mavharo anogona kubatsira kudzivirira blister uye abrasions pamaoko ako.
Zvinhu Zvinogumbura Zvekudzivisa Kutaura kune Vashandisi Vemagumbo eWiricheya
Nzira dzekubatsira Wiricheya Mushandisi